Dr. Tint Swe's Writings: PEM နာတာရှည် အားနည်းရောဂါနဲ့ နာတာရှည် တရားရေးစနစ်ရောဂါ
PEM နာတာရှည် အားနည်းရောဂါနဲ့ နာတာရှည် တရားရေးစနစ်ရောဂါ
(သို့) တရားရေးစနစ်အတွက် မဲပေးကြပါ
Chaw Su မင်္ဂလာပါဆရာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ၈ နှစ်သမီးလေး တပ်မတော်သားတစ်ဦးက rape လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ပါတယ်။ ကလေးမလေးက long term PEM နဲ့ စိတ်ကလည်းသိပ်မူမမှန်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Sept 23 မှာ rape လုပ်ခံရတယ်။ Oct 21 မှာ ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်တယ်။ ဆရာဝန်က Cause of death မှာ Long term PEM ကြောင့်ဆုံးတယ်လို့ပြောတာ ဂျာနယ်တွေမှာပါလာတယ်။ ပြည်သူတွေက တပ်မတော်သား ရဲ့ rape ကြောင့် ဆုံးတာကို LTPEM ကြောင့်လို့ ဆရာဝန်ကပြောတဲ့အတွက် ဆရာဝန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Cause of death မှာ Rape ရောအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ရေးခွင့်ရှိမရှိ သိလိုပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတွေက အစိုးရရဲ့ဖိအားကြောင့် ဆရာဝန်ကလုပ်တာဆိုပြီး ဆရာဝန်အပေါ် ပြစ်တင်ရှုံ့ချနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Cause of death မှာ Rape ရောအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ရေးခွင့်ရှိမရှိ သိလိုပါတယ်ဆရာ။
Long term PEM = ရေရှည် နာတာရှည် ပရိုတင်း + အင်နာဂျီနည်းခြင်းရောဂါ
Rape = အဓမ္မ (မုဒိန်း) ကျင့်ခြင်း
Cause of death = သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်း
PEM (Protein–energy malnutrition) ဆိုတာ နာတာရှည် ပရိုတင်း + အင်နာဂျီနည်းခြင်းရောဂါလို့ခေါ်တယ်။ Protein-calorie malnutrition ပရိုတင်း + ကယ်လိုရီ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာဖြစ်တယ်။ တနေ့တာလိုအပ်ချက် ကယ်လိုရီ မပြည့်ရာကနေ ဖြစ်တယ်။ ပရိုတင်း ခေါ် အသား-ငါး-ဥ-ပဲ တွေကနေရတဲ့ဓါတ်ပါ ချို့တဲ့နေမယ်။ တမျိုးချင်းနည်းတာလည်းရှိတယ်။
အမျိုးအစားခွဲတွေရှိတယ်။ Primary PEM အစကတည်းကဖြစ်တယ်ဆိုတာ စားတာထဲမှာ ပရိုတင်းနည်းနေလို့။ Secondary PEM ဆိုတာ နာတာရှည်ရောဂါတခုခု ဥပမာ ကင်ဆာ၊ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အူလမ်းရောင်ရောဂါ၊ AIDS စတဲ့ ရောဂါတခုခုရှိနေရာကနေဖြစ်တယ်။
Kwashiorkor ကဝါရှိရော်ကောဆိုတဲ့ရောဂါကိုတော့ အစိုမျိုးလို့သတ်မှတ်တယ်။ ပရိုတင်းနည်းတာကအဓိကဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေနို့ဖြတ်ချိန် ၁၂ လသားလောက်မှာစဖြစ်တတ်တယ်။ တခြားအရွယ်တွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖေါရောင်နေမယ်။ အရေပြားခြောက်နေမယ်။ ဆံပင်အရောင်ဖြော့တော့နေမယ်။ Marasmus မရားစမတ်ကတော့ အခြောက်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ပရိုတင်းရော ကယ်လိုရီရောနည်းနေမယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုတန့်နေမယ်။ ကြွက်သားတွေ ကြုံလှီနေမယ်။ ဝမ်းပျက်ရင်ပိုဆိုးမယ်။ PEM ရောဂါရှိနေသူတွေမှာ ရောဂါပိုးတွေကူးစက်ခံရလွယ်တယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာမယ်။
မေးခွန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကတရားရေးစနစ်ကိုနည်းနည်းလေးရေးပါရစေ။ အဲတာလည်း နာတာရှည်ရောဂါပဲ။ ပိုဆိုးတာက ကပ်ရောဂါနဲ့ မွေးရာပါရောဂါလို့ပါ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီရောဂါကိုလုပ်ယူခဲ့တာ နှစ် ၅ဝ ရှိနေပြီ။
ဆရာဝန်ဖြစ်မယ့်သူတိုင်း မှုခင်းဆိုင်ရာဆေးပညာကိုသင်ကြရတယ်။ ဆေးကျောင်းမှာ ၇ နှစ်ထားတုံးက တနှစ်ခွဲတန်းမှာ သင်ပေးတယ်။ ၆ နှစ်ခွဲ၊ ၆ နှစ်သာထားတော့ ဘယ်လောက်အထိသင်ပေးချိန်ယူသလည်းတော့ မသိပါ။ အဲတာက ပညာပိုင်း။ ပညာဆိုတာ ဆည်းပူးရင် ကျောင်းကသင်ပေးချိန်မရလည်း တတ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ တရားရုံးတွေမှာ ပညာရှင်သက်သေအဖြစ်လိုက်ပြီး ထွက်ဆိုရတာက ပညာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကြာပြီ။ ဆရာဝန်က မှုခင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာအရ တိတိကျကျထွက်လည်း အမှုကဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်တယ်။ ထောင်ချချင်ရင်ချတာပဲ။ လွှတ်ချင်လွှတ်တာပဲ။
အဲလိုဖြစ်နေတာ ဗိုလ်နေဝင်းတက်ကတည်းကနေ လက်ရှိအစိုးရအထိ အတူတူပဲ။ အဲလိုတရားစီရင်ရေးစနစ်ထဲမှာ ဆရာဝန်ကို သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းကို လိုသလိုရေးစေအောင်ခိုင်းနေတာ မလိုတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ မတရားလည်း လုပ်ချင် ဖုံးဖိချင်နေတယ်။ ဆရာဝန်ကို အငှားဖိုက်ဓါးထိုးခံစေနေတာသာဖြစ်တယ်။ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ပိုဆိုးလာတယ်။ စစ်အစိုးရလို မဆိုးတောဘူးလို့ပြောချင်တာနဲ့ ဥပဒေတွေ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ညီတယ်လို့ လုပ်ပြနေလို့ ပိုဆိုးတာဖြစ်တယ်။ တကယ်တန်း တရားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်လာတော့ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်က ဆရာဝန်လည်းလုပ်၊ အမတ်လည်းဟုတ်ခဲ့သူဖြစ်လို့ နမူနာပေးပါမယ်။ ၁၉၉ဝ တုံးက အရွေးခံခဲ့ကြရတဲ့ အမတ်တွေကို အမတ်အဖြစ်ကထွက်အောင် လက်မှတ်တွေလိုက်အထိုးခိုင်းတယ်။ ခြိမ်းခြောက်နည်း မျိုးစုံသုံးတယ်။ တချို့က ထိုးကြရတယ်။ မထိုးသူတွေ အဖမ်းခံကြရ၊ ထောင်ကျကြရ၊ ပြည်ပထွက်ပြေးကြရတယ်။ အခုလို အမှုမျိုးမှာလည်း ဆရာဝန်တွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တိုင်းကတော့ သောနုတ္တိုရ်ဟုတ်ပါ။
PEM ရောဂါမှာ AIDS လိုပဲ သေစေတဲ့ရောဂါတခုကြောင့်သာ သေရတယ်။ PEM ရောဂါသည်ကလေးမလေးဟာ အဓမ္မ (မုဒိန်း) ကျင့်ခံရလို့သာ အသေစောတာလို့ ရှေ့နေကလျှောက်လဲနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တရားခံကိုကြည့်ပြီး အမှုကို ပြီးစေမှာသာဖြစ်တယ်။ တရားရေးစနစ်အတွက် မဲပေးကြပါခင်ဗျား။
ဖူးပွင့်ကြတဲ့ ပန်းမာလာ သင်းရနံ့ကဖြာ
ဆရာ ရနံ့ နဲ့ အနံ့ကို ဘယ်လိုသုံးပါလဲ ရှင်းပြပေးပါ။ ရနံ့ထုံသင်းလို့ ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်းမှာပါတယ်။ အနံ့ကတော့ အ ထည့်လို့ နာမ်စာလုံးဖြစ်လာတဲ့ အနံ...
► 2017 (3350)
▼ 2015 (2276)
Grateful to You ကျေးဇူးတင်လွှာ
English ဘာသာစာပေစောင့်ဥပဒေ ပေါ်ပါစေ
EU doctor suspended from UK work for poor English ...
TB joins HIV as most deadly infection
Indelible ink ရာသက်ပန်ဖျက်မရတဲ့မင်
ocial Media မီဒီယာမဟုတ်တဲ့ သတင်းဆရာ
Hello November ဟယ်လို နိုဝင်္ဘာ
Bedtime Poem ကလေးချော့ လင်္ကာ
Sweep vote အမှိုက်သိမ်းရေး မဲပေးပါ
Can Burma Save Buddhism From the Politicians?
Down syndrome ဒေါင်းန်-ဆင်ဒရုမ်း
Night supper ညလည်စာ
Red Ground ကင်းဝန်ရဲ့ရွာမှာ
Eligible voter list မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်တက်ကြပါ
The Answer စစ်ကိုင်းတိုင်းက အဖြေပြ
Thanks to Commission က ကော်မရှင် ကျေးဇူးတင်
Garbage Revolution အမှိုက်သိမ်းခွင့် တော်လှန်ရေး
I really love to vote လူကြည့်ပြီး မဲပေးတယ်
Monywa တရားနဲ့ အားရှိတဲ့ဆီမှာ
Words from Monywa မုံရွာသူ့အပြော
Vote for Child labor ကလေးအလုပ်သမားများအတွက် မဲပေးပါ
Pay respects သမီးတို့က ကန်တော့ကြတဲ့ည
Vote for school lunch နေ့လည်စာအတွက် မဲပေးပါ
Milestone prostate cancer drug ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆေး သမ...
Sword power ဓါးစွမ်း
Paracetamol and pregnancy (ပါရာစီတမော) နဲ့ ကိုယ်ဝန်
VigRX Plus သတိပေးပါရစေ
Combat helmet သံခမောက်ဆောင်းထားသော မြေပုံ
Rheumatoid Arthritis လေးဖက်နာ (အဆစ်နာ)
Pay respect night ကန်တော့ကြတဲ့ည
Candle light မီးထွန်းတဲ့ည
Hello နှုတ်ဆက်စကား အလေးထား
Hot air balloon catches fire မီးလောင်သွားတဲ့ သတ်ပုံ
Parents အမေ-အဖေ့ ဓါတ်ပုံ
Tea shop လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အဝေးကနေအတူထိုင်
Elastic epilepsy အတက်ရောဂါတမျိုး
To all young organizers
Mischievous operation မဟာဒုတ်နဲ့ မဟာယုတ်
Change for the worse ပြင်တာတဲ့လား
Just Art အတုပညာ
Dear ဒီးယား စည်းရုံးရေးသမား
Cock-a-doodle-doo! အောက်အီအီး အွတ်
Myanmar's Growth, Stability Hinge on General Elect...
Royal Thief သန်လျက်တော်ယူတဲ့့
Our Cause အမျိုးဘာသာ ကျန်းမာပါစေ
Known and Probable Human Carcinogens
Processed meat causes cancer ပြုပြင်ထားတဲ့အသားတွေက...
Mistakes ဘယ်သူတွေက ပိုမှားသလည်း
8th of November နိုဝင်္ဘာ (၈) သီချင်း
Coming November ပေါင်းရှင်းချိန်
My Teachers မုံရွာက ကျွန်တော့် ဆရာဆရာမတွေ
Moving target ဣနြေ္ဒမရ
November words နိုဝင်္ဘာ စကားများ
Health System ကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် မဲပေးကြပါရန်
Current trend ကာလပေါ်
Political colors နိုင်ငံရေးအရောင်များ
The Audacity of Hope Quotes (2)
Uniformity အနီမဝတ်ပေမယ့် ညီညွတ်ကြတယ်
Japan = အီဂျစ်
Uneven playing field အင်ဂျင်နီယာအမှားနဲ့ သင်္ချာအမှား
Two dozen Jade news in 24 houes
Big polluters, pay up ညစ်ညမ်းသူတွေက ပေးဆပ်ရမယ်
Lessons during election campaign အမေစုကို ချစ်အုံးဟဲ့
All work and no play, Myanmar's children prop up e...
Burmese Jade မြန်မာ့ကျောက်စိမ်း (သို့) မြန်မာနိုင်...
PEM နာတာရှည် အားနည်းရောဂါနဲ့ နာတာရှည် တရားရေးစနစ်ေ...
Myanmar elite enriched by jade မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ ...
Report Card လက်ရှိအစိုးရ၏ ရီပို့ကပ်
Jade: Myanmar’s Big State Secret
With eyes closed မျက်စိမှိတ်ထားသော်လည်း
Aspirin trial to examine if it can stop cancer ret...
The leader သမတနဲ့ ခေါင်းဆောင်
Green no more အစိမ်းရောင်၏အနိစ္စ
Worthiness စာဖတ်ရ၍ ဝမ်းမြောက်ကြစေ
ငေးမနေနဲ့ တွေးမနေနဲ့ NLD ကို မဲပေးမည်
Write-in Vote စာရေးပြီး မဲပေးမယ်
Alcoholic beverage သောက်စရာအရက်
Red or White Grapes စပျစ်သီး အနီနဲ့ အစိမ်း
Green or Red for better night vision အစိမ်းနဲ့ အနီ
Corruption Perceptions Index အကတိလိုက်စာမှုညွှန်းကိန်း
Around4million voters shut out of historic Myanm...
Vote for environment သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မဲပေးပါ
Vote for Reality အမှန်ကိုသိဘို့ မဲပေးစို့